2012-04-22 ~ Myanmar Express
နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်လိုသူများက ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်လိုကြောင်း လျှောက်ထားလျက်ရှိ
နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်လိုသူများက ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်လိုကြောင်း လျှောက်ထားလျက်ရှိရာ ဧပြီ ၂၆ ရက်တွင် ဦးခင်ဇော် အပါအဝင် ပုဂ္ဂိုလ် ၂၂ ဦးက အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ တည်ထောင်လိုကြောင်း လာရောက်လျှောက်ထားသည်။ ထို့အတူ ဧပြီ ၂၆ ရက်တွင် ဦးနိုင်ငွေသိမ်း အပါအဝင် ပုဂ္ဂိုလ် ၁၅ ဦးက မွန်ဒီမိုကရေစီပါတီကို တည်ထောင်လိုကြောင်း လာရောက်လျှောက်ထားခဲ့သည်။ ယင်းလျှောက်ထားချက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပါတီတည်ထောင်လိုသူ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် နိုင်ရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေပုဒ်မ ၄ နှင့် ပုဒ်မ ၆ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ၊ မရှိ စိစစ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများထံ မေတ္တာရပ်ခံ ညှိနှိုင်းထားကြောင်း သိရှိရသည်။ Myanmar Express Read More
မြန်မာလူငယ် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား ဂျပန်မှ ပညာတော်သင်အဖြစ် ခေါ်ယူမည်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းအား ကူညီသည့်အနေဖြင့် ဂျပန်အစိုးရမှ မြန်မာလူငယ် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပညာသင်နိုင်ရေး ယမ်းငွေသန်း ၂၀၀ ထောက်ပံ့မည်ဖြစ်ကြောင်း ယူမီယူရီရှင်ဘွန်း သတင်းစာ၌ ဖော်ပြထားသည်။ ဧပြီ ၂၀ ရက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တိုကျိုမြို့သို့ ရောက်ရှိပြီး ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ယိုရှီဟီကိုနိုဒါနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် တရားဝင် ကြေညာခဲ့သည်။ မြန်မာလူငယ် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ဂျပန်တက္ကသိုလ်များတွင် ဥပဒေအုပ်ချုပ်ပုံ နည်းစနစ်၊ မူဝါဒချမှတ်ပုံ၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍများတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လေ့လာဆည်းပူးနိုင်ကြရန် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ပြောင်းလဲရေး၊ စီးပွားရေးအခြေခံများ ဖော်ဆောင်ခြင်းနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးများ စတင်ဆောင်ရွက်နေသော်လည်း အဆိုပါ လုပ်ငန်းများတွင် ကျွမ်းကျင်သူ ရှားပါးနေကြောင်း ယူမီယူရီရှင်ဘွန်း သတင်းစာ၌ ရေးသားထားကြောင်း သိရှိရသည်။
From : ကိုစိုးကြည်
* (၉၉) မီးကျောင်းချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၁၅ ) ရွာပေါင်း ကိုးဆယ့်ကိုးရွာ ရှိ ရခိုင်ရွာများမှာ ကုလားယုတ်တို့ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံကြရလေသည် ၊ ထိုထိုသော ရွာများမှ သက်ရှိဆို လျှင် ခွေးတစ်ကောင်တောင် အပြင်ကိုမထွက်ဘဲ သေပွဲဝင်ခဲ့ကြရသည်၊ ထိုအပြင် ရွာလုံးကျွတ် ကုလားသတ်ဖြတ်ခံရ၍ အိမ်ခြေအလိုက် စနစ်တကျ ကောက်ခံရှာဖွေ မရရှိသော ကျေးရွာများမှာလည်း အလွန်များပြားသည်ကို တွေ့ရပါသည် ၊
* (115) လှပိုးခေါင်ရွာ စုစုပေါင်း ရွာပေါင်း (115)ရွာတို့သည်
ကုလားကို ယုံကြ ၊သနားကြ ၊ ကုလားဆိုင်က ၀ယ်စားကြ ၊ကုလားရောင်းသောပစ္စည်းကိုဝယ်သုံးကြမည်ဆိုလျှင် ထိုထက်ဆိုးသော အဖြစ်သို့ ရောက်ရအုံးမည်ဟုယုံကြည်မိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အထက်ပါ(1942 )အရေးအခင်းတွင်ရခိုင်လူမျိုးများသာ အသတ်ခံရသည်။ နယ်မြေများဆုံးရုံးခဲ့ရသည်။သိုသော် ဘာသာ သာသနာ၊ယဉ်ကျေးမှုများ မပျောက်သေးပါ၊ အခုဒီကောင်တွေ ရိုဟင်ဂျာ နာမည်ခံပြီး တိုင်းရင်းသားစာရင်းသွင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုလာပြီ။ ဒီကိစ္စကိုသက်ဆိုင်သူများ ပေါ့ပေါ့တန်တန် ထားမည်ဆိုပါက အနာဂတ်မြန်မာပြည်အတွက် အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းပါကြောင်း... Myanmar Express
ကေအိုင်အေ(ကချင်) အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့ ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ တံတားများအား မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီးလျက်ရှိ
၂၆ ရက်နေ့ မနက်က KIA တို့ထောင်ထားတဲ့ မိုင်းနင်းမိတဲ့ ကချင်ကလေးမနိုင်ငံတော်အစိုးရအဆက်ဆက်သည် နိုင်ငံအတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုကောင်းမွန်ပြီး အများပြည်သူများ သွားလာမှု အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေရန်အတွက် လမ်း/တံတားများအား ဘဏ္ဍာငွေအမြောက်အမြား အကုန်အကျခံ၍ ဖောက်လုပ်ပေးလျက်ရှိသော်လည်း ကေအိုင်အေ(ကချင်) အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့သည် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း လမ်းပန်း ဆက်သွယ်သွားလာမှု နှောင့်နှေးခက်ခဲစေရန် ရည်ရွယ်၍ စစ်ရေးနှင့် မပတ်သက်သည့် ပစ်မှတ်များဖြစ်သော လမ်း/တံတားများအား ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန် ၉ ရက်မှ စဉ်ဆက်မပြတ် မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီးလျက်ရှိရာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၀ ရက် အထိ ပေ ၁၈၀ အထက်တံတား ၁၄ စင်း၊ ပေ ၁၈၀ အောက်တံတား ၈၁ စင်းတို့အား မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဧပြီ ၂၁ ရက်တွင်လည်း မြစ်ကြီးနား-ပူတာအို ကားလမ်း ဆွမ်ပီယန်ကျေးရွာအနီး ပေ ၇၀ အရှည်ရှိ သံပေါင်ဘေလီတံတားအား ၀၀း၃၀ နာရီတွင် မိုင်း ထောင်ဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီးခဲ့၍ တံတား ကြမ်းခင်းများ ပျက်စီးခံ့သည်။ အလားတူ ဧပြီ ၂၄ ရက်ကလည်း မြစ်ကြီးနား-ဝါရှောင်-ချီဖွေ ကားလမ်း ဆင်နီကူးနှင့် မလိယန် အကြားနန့်မလိ ချောင်းကူး အရှည်ပေ ၁၅၀ ရှိ သံပေါင်ဘေလီတံတားအား ၀၂း၅၀ နာရီတွင် မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီးခဲ့ရာ တံတားတစ်စင်းလုံး ကျိုးကျပျက်စီးခဲ့ပြီး နေ့စဉ်သွား ယာဉ်ကြီး/ယာဉ်ငယ်များ ရှောင်ကွင်းလမ်းမှ ခက်ခဲစွာနှင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ သွားလာနေရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ပျက်စီးခဲ့သည့် တံတားများအား နယ်မြေခံတပ်မတော်သားများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ပြုပြင်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ Myanmar Express Read More
မြန်မာ လူမျိုးများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာများဖြင့် ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့စွာ နေထိုင်သော လူမျိုးများ ဖြစ်ပါသည်။ အဘိုး၊ အဘွား၊ အမိ၊ အဖ၊ အစ
မြန်မာ လူမျိုးများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာများဖြင့် ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့စွာ နေထိုင်သော လူမျိုးများ ဖြစ်ပါသည်။ အဘိုး၊ အဘွား၊ အမိ၊ အဖ၊ အစ်ကို၊ အစ်မနှင့် ဆွေမျိုး များအပေါ်၌ ရိုသေကိုင်းရှိုင်းပြီး မိမိထက် တစ်မနက်ကြီးသော သူကိုပင် ရိုသေ လေးစားစွာ ဆက်ဆံ ကြသော လူမျိုးများ ဖြစ်ကြပါသည်။ လူကြီးမိဘများသည် ငယ်စဉ်ကပင် သားသမီးများအား ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု အခြေခံများ ရရှိစေရန် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများတွင် သင်ကြား ဖွင့်လှစ်ပေးသော နွေရာသီ ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု သင်တန်းများသို့ တက်ရောက် စေပါသည်။ ကျေးလက် ဒေသများတွင် အခမ်း အနားဖြင့် ဖွင့်လှစ် သင်ကြားလျက် ရှိသည်ကို ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်များ အနေဖြင့် ကြည်နူးစွာ မြင်တွေ့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ သာဓုပရိယတ္တိ ကျောင်းတိုက်သည်လည်း ရွှေည၀ါ ဆရာတော်၏ ဦးစီး လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ယဉ်ကျေးလိမ္မာ သင်တန်းကို နှစ်စဉ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်မှာ ၁၀ နှစ်ခန့် ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကလေးသူငယ်များအား ယာဉ်ကျေးလိမ္မာ အခြေခံသင်တန်းများ ဦးစီး သင်ကြား ပေးနေ သော ရွှေည၀ါ ဆရာတော်သည် ၄င်းထက် ၀ါတော်၊ သိက္ခာတော် ကြီးမားပြီး သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ဂုဏ်တို့ဖြင့် ပြည့်စုံသည့် နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့ ဗဟိုဝန်ဆောင် ဆရာတော်ကြီးများ အပါ အ၀င် အခြားဆရာတော်ကြီးများ အပေါ်၌ ပုတ်ခတ် စော်ကား၍ ပြည်သူလူထုနှင့် အစိုးရမှ သီလ၊ သမာဓိ၊ သိက္ခာဂုဏ်များဖြင့် ပြည့်စုံ သောကြောင့် ကြည်ညို လှူဒါန်းကြသော ကျောင်းတိုက်ကြီးများနှင့် ကား အကောင်းစားကြီးများကို မစွန့်လွှတ်နိုင်၍ အစိုးရ အလိုကို လိုက်နေကြောင်း၊ အစိုးရ အလိုက် အကြိုက်ဆောင် သောကြောင့် ဘွဲ့တံဆိပ်များစွာ ရရှိနေကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည့်အပြင် သံဃနာယက ဆရာတော်ကြီးများမှ ဆိုဆုံးမမှုကိုလည်း ဆီလို အပေါက်ရှာ၍ အပြစ်ယူနေသည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ ရွှေည၀ါဆရာတော်သည် ၄င်းထက် ၀ါတော် ၊ သ်ိက္ခာတော် ကြီးမားသော သံဃာတော်ကြီးများ အပေါ်တွင် ပြစ်မှား ပြောဆိုသည်မှာ ၀ိနည်းနှင့်အညီ စော်ကားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ် ရမည်လား၊ ရဟန်း၊ သာမဏေငယ်များမှ အတုယူ၍ လိုက်ပါပြောဆိုမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက သာသနာတော်နှင့် ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်များ အပေါ်တွင် ရင်လေးဖွယ်ရာပင် ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးသူငယ်များ အပေါ်တွင် ယဉ်ကျေး လိမ္မာစွာ နေထိုင်ရန် ဆိုဆုံးမမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး ဆရာတော် ကိုယ်တိုင်က စိတ်ထင်တိုင်း ပြုမူနေသည်မှာ မသင့်လျော်ကြောင်း မြင်တွေ့ရပါသည်။ ငါပြောသလိုလုပ်၊ ငါလုပ်သလိုမလုပ်နဲ့ ဆိုသည့် ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေပါသည်။ ဆရာတော်ကြီးက သီးခံ ခွင့်လွှတ်သော်လည်း ၀စီကံမြောက် စော်ကားသည့် အကုသိုလ် အကျိုးတရား ကရော ရွှေည၀ါဆရာတော်အပေါ်တွင် ခွင့်လွှတ်ပါမည်လား။Myanmar Express
အင်တာနက်သုံးသူ အမေစု သား/သမီး များအတွက် သင်တန်း တစ်ခု
မျိုးဆက်သစ် ကျောင်းသားလူငယ်များ ယဉ်ကျေးလိမ္မာ စေဖို့အတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု သင်တန်းကို မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန် ၂ လမ်းမှာရှိတဲ့ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး ဓမ္မာရုံမှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီလို သင်တန်းတက်ရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေမှာ ကလေးတွေအတွက် အသိလိမ္မာ တိုးပွားလာနိုင်ခြင်း ၊ ပါဋ္ဌိစာပေ အရေး ၊ အဖတ် တတ်မြောက်လာနိုင်ခြင်း ၊ ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းတတ်ပြီး လူမှုဆက်ဆံရေး အတတ်ပညာများ တိုးပွားလာနိုင်ခြင်း အစရှိတဲ့ အကျိုးကျေးဇူး တွေရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ သင်တန်း ကိုတော့ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့မှ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီး သင်တန်းမှာ သင်တန်းသား ၅၀ ဦး တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ သင်တန်းကို တော့ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး ၊ ဥပဒေရုံးများဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓသာသနာ့ နုဂ္ဂဟ အသင်းမှ ကြီးမှူး ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပြီး ၁၁ ကြိမ်မြောက် ဖွင့်လှစ်တဲ့သင်တန်း ဖြစ်တယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။ Myanmar Express
Economic Investment & Possibility of Lifting Sanction-စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်မှုတွေ ရုတ်သိမ်းခဲ့လျင်---ရင်းနှီးမြှုပ်နံမှုတွေ ပိုဝင်
From : UDPEconomic Investment & Possibility of Lifting Sanction on Myanmar????စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို.အရေးယူမှုတွေ ရုပ်သိမ်းတော့မည့် အခြေအနေမြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံရေးအရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ.အညီ ရွစိရွစိဖြစ်လာနေတဲ့အရာကတော့ စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နံမှုတွေနဲ. Sanctions တွေ ရုပ်သိမ်းတော့မှာလား စဉ်းစားချက်တွေပါ။ဒါတွေဟာ တခုနဲ.တခု ဆက်စပ်နေတာမို. လက်ဦးမှု ရရှိနိုင်ဖို.အတွက် နိင်ငံခြားလုပ်ငန်းရှင် တွေအကြား စိတ်ဝင်စား စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာတွေလဲ ဖြစ်ပါသည်။မြန်မာပြည်မှာ များသောအားဖြင့် အာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ထိုင်း ကိုးရီယား စင်္ကာပူနဲ. တရုတ် နိုင်ငံတွေ၏ ကုမ္မဏီတွေက အများအပြား လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ များခဲ့တာမှန် သော်လဲ အခုအခါ ဂျပန်နဲ. ဗီယက်နမ်တွေဆီက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ စိမ်.၀င်လာ နေပါပြီ။အမေရိကန်နှင့် အနောက်နိုင်ငံတွေ၏ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို.မှု Sanctions တွေ ပြန်ရုပ်သိမ်းသွား တော့မှာလားဆိုတဲ့ စဉ်းစားချက်တွေ အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်ခြေတွေလဲ ပေါ်လာနေတဲ့အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ-Investors အနေဖြင့် စဉ်းစား တွက်ချက် နေရပါပြီ။မြန်မာပြည်မှာ သူများထက် ဦးအောင် ၀င်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ Pioneers ဖြစ်အောင် လုပ်ဖို. လိုတဲ့ စဉ်းစားချက်က တဖက်ဖြစ်ပြီး နောက်တဖက်ကျတော့ လက်ရှိ မြန်မာပြည်က တရားရေး စနစ်နဲ. ငွေကြေးစနစ်တွေ၏ ခိုင်မာမှု တိကျမှု ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိမှု စတဲ့ အားနည်ချက်တွေ ကြောင့်လဲ ကိုယ့်၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် အာမခံချက် ရှိပါမလား အန္တရာယ်များ-Risk Factor တွေကလဲ နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းရှင်တွေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ ချိန်ဆနေ ရ ခေါင်းကိုက်စရာ တွေးစရာ ဖြစ်ပါသည်။အဲဒီစိုးရိမ်ချက်တွေကို ကြောက်ပြီး လက်တုန်.နေမယ် နောက်ကျနေမယ်ဆိုရင် တကယ်လို. စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်မှုတွေ ရုပ်သိမ်းလိုက်လို. ဗြုန်းကနဲနဲ. အင်နဲ.အားနဲ. သိမ်းကျုံးပြီး အနောက်နိုင်ငံတွေက ကုမ္မဏီတွေဝင်လာပြီး လက်ဦးသွားခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ စဉ်းစာချက်ကလဲ အထူး သဖြင့် ဒေသတွင်း အာရှနိုင်ငံက ကုမ္မဏီတွေအတွက် အိပ်မပျော်နိုင်တဲ့ ဖိအားပေး Pressure တွေဖြစ်နေပါတယ်။ “Big IF” ကြီးမားတဲ့ အကယ်၍ ဆိုတဲ့ စဉ်းစားမှုတွေပါ။မြန်မာပြည်မှာ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမှာလဲ နိုင်ငံအလိုက် ဒေသအလိုက် ကွဲလွဲမှုတွေ ရှိပါသည်။ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွေဟာ မိုင်းနဲ. သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေ Natrual Resources & Mine Development တွေမှာ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားမှု ရှိနေပြီး ထိုင်းတို. မလေးရှားနဲ. စင်္ကာပူတို.ကတော့ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး Manufacturing and Production အပိုင်းတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ပိုတိုး လုပ်လာနိုင်ပါသည်။ ဂျပန်နဲ. တောင်ကိုးရီးယားတို ဆိုရင် Food & Beverage-စားသုံးကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ. စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွေမှာ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုတွေ ပိုလုပ်ချင်တဲ့ သဘော တွေ.ရပါသည်။ အိန္ဒိယနဲ. ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ကုမ္မဏီ တွေကတော့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေယာဖွံ.ဖြိုးရေး Agriculture and Land Development တွေမှာ သူတို.၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ထည့်ချင်တဲ့ ဆန္ဓတွေ ရှိပါသည်။အမေရိကန် အပါအ၀င် အနောက်နိုင်ငံတွေကတော့ Manufacturing, Production and Resource Development တွေမှာ ထက်စာရင် သူတို.နိုင်ငံတွေ၏ အာသားချက်ဖြစ်တဲ့ Banking, Financial Service Technology Communication & IT စတဲ့ နည်းပညာနဲ. ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေ ဘဏ် လုပ်ငန်းနှင့် ငွေကြေးစနစ် အာမခံလုပ်ငန်းတွေမှာ အကယ်၍ မြန်မာပြည်ကိုလာပြီး ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမယ်ဆိုရင် ပိုပြီး အာရုံစိုက်မယ် ထင်ပါသည်။ သူတို.နိုင်ငံ တွေမှာ အလုပ်လက်မဲ့များနေလို. ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ ၀င်လာဖို. နည်းပြီး ထိုင်း တို. တရုတ်နိုင်ငံတွေကတော့ ကုန်ကျ စရိတ် သက်သာမည့် မြန်မာပြည်ကို သူတို.၏ ကုန် ထုတ်လုပ်မှုတွေ Manufacturing and Production/ Assembly Line တွေ ရွှေ.ပြောင်းနိုင်ပါသည်။အနောက်အုပ်စုတွေကတော့ မြန်မာပြည်၏ နိုင်ငံရေး စီးပွားရေးနဲ. အခြေခံအဆောက်အဦး တွေအပေါ် ဒီလောက်အထိ ယုံကြည်မှု မရှိသေးတော့ ၀န်ဆောင်မှုလို နည်းပညာလို ရွှေ. ပြောင်းလွယ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ ၀င်လာပြီး လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထုနဲ ထည်နဲ. ရင်းနှီး မ တည် ငွေတွေ ထားရမည့် စက်ရုံ အလုပ်ရုံလို ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေမှာ ၀င်ပြီး ရင်းနှီးမြှု့ပ်နှံမှုတွေ လုပ်လာမယ်လို. ယူဆဖို. ခက်ပါသေးသည်။နိုင်ငံခြား လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် အဓိက စိမ်ခေါ်ချက်ဖြစ်တဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး Rule of Law and Judiciary System တွေမှာ အခြေခံကနေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို. လိုနေသလို Banking System and Financial Institutions တွေ ခိုင်မာလာအောင် အာမခံချက်တွေ ရှိလာအောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို.လိုပါသည်။ ဒီအချက်တွေက နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက် သူတို.၏ ငွေတွေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာ ဘယ်လောက်အထိ အာမခံချက်ရှိမလဲ ဘယ်လောက်အထိ တာဝန်ခံနိုင်မလဲ ယုံကြည်စိတ်ချရမလဲဆိုတဲ့ အဓိက စိုးရိမ်ချက် ပူပင်သောကတွေပါ။ Income Tax, Import & Export Regulations တွေလဲ ဒီထက် ရှင်းအောင် လက်တွေ. ကျအောင် ပြုပြင်ဖို.လုိုပါသည်။အချုပ်ပြောရရင် မြန်မာပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်က မြန်မာပြည်က ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ငွေကြေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာ ယုံကြည်မှု Confidence ရှိအောင် မွေးမြူရမယ်။ လုပ်ယူရမယ်။ အဲဒီ အချက် ဥပဒေတွေနဲ. တိတိကျကျ အာမခံချက်တွေ တာဝန်ခံမှုတွေ ပေးဖို. လိုပါသေးတယ်။ ငါတို.ငွေတွေ ထည့်လိုက်ပြီး အမြတ်ရောအရင်းပါ ဘယ်လိုနည်းဖြင့် ပြန်ထုတ်ယူလို. ရနိုင်မလဲ ဆိုတာ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှု့ပ်နှံသူတွေ အရင်းဆုံးမေးတတ်တဲ့အရာတွေပါ။တချိန်တည်မှာ Investor Relations, Business Communiations အပိုင်းတွေမှာလဲ ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေ- Well Trained Skillful Professionals တွေ အများကြီး လိုနေ သေးပါသည်။ လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်တွေ- Human Resources တွေ လုံလောက်မှာသာ နိုင်ငံတကာအနေဖြင့် Reliable ရှိတယ်လို. ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် လက်တွေ.ကျကျ သူတို. အိတ်ကပ်တွေ ဖွင့်လာမယ် ငွေတွေ ထုတ်လာမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ မဟုတ်ရင်တော့ အနောက်နိုင်ငံတွေ ၀င်လာရင် ငါတို.တော့ နောက်ကျကုန်မယ် ပြိုင်ဆိုင်ဖို. အတော် ခက်မယ် လို. စိတ်ပူနေတဲ့ အာရှနိုင်ငံတွေက ကုမ္မဏီတွေကိုယ်တိုင် ငွေထုပ်ကိုင်ပြီး ထိုင်မရ ထမရ ဖြစ် နေသော်လည်း ၀င်လာမည့် အရင်းအနှီးတွေက နည်းနေဦးမည်ပါ။ သူတို. ငွေတွေကို လုံးလုံး လျားလျား စိတ်မချနိုင်သေးတာ ရှိနေလိုပါ။ရေနံ။ သဘာဝဓာတ်ငွေ.၊ စွမ်းအင်နဲ. လျှပ်စစ်၊ လမ်း တံတား အပါအ၀င် အခြေခံ အဆောက် အဦး Basic Infrastructures နဲ.ဆိုင်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာနဲ.ဆိုင်တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အပိုင်းမှာတော့ နိုင်ငံတော်အစိုးရက တိုင်းပြည်၏ အမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ. အကျိုးစီးပွား National Security, National Interests ကို ချိန်ဆပြီး မျှတအောင် balance လုပ်ပြီး ထိန်းညှိပြီး ခွဲချပေးမည် ထင်ပါသည်။ ဒီတော့ နိုင်ငံတခုတည်းကို လက်ဝါးကြီး လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးမည် မတင်ပါ။ ။။ ။။ဒီအချက်တွေဟာ လက်ရှိ မြန်မာပြည်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ. Sanctions တွေ ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေနောက်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ စဉ်းစားမှု လုပ်ဆောင်မှု ပြင်ဆင်မှုတွေပါ။ အနောက်နိုင်ငံတွေက ကုမ္မဏီတွေ လာပြီး ၀င်ဦးသွားမှာကို ဒေသခံ အာရှ နိုင်ငံက ကုမ္မဏီတွေက စိတ်ပူနေကျရင်--- အိမ်ရှင် ကာယကရှင်တွေကရော----ကိုယ်တိုင်းပြည် ကိုယ့်အနာဂတ် စီးပွားရေး ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ. Monopoly and Pioneers ဖြစ်အောင် Stakeholders တွေအနေဖြင့် ကိုယ့်တိုင်းပြည်၏ အရင်းအမြစ်နဲ. စီးပွားရေး ရေခံမြေခံနဲ. အခွင့်အလမ်းတွေ တိုးတက်ကောင်းမွန် ပွင့်လင်းလာတဲ့အပေါ် လက် တွေ.ကျကျ အကျိုးခံစားခွင့်တွေ ကိုယ်မိသားစုတွေထဲ ရောက်ရှိလာအောင် အခု ဘာတွေ လုပ်နေကြပြီလဲ။။။ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလဲ။ သူများ လာလုပ်တာကိုပဲ လက်ပိုက်ပြီး ဘေးကနေ စောင့်ကြည့်ရမည့် အဆင့်မှာပဲ ရပ်နေရစ်မှာလား--- စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။Myanmar Express
From : မြတ်သိန်းထွန်း
ဒီဓာတ်ပုံထဲမှာပါတဲ့ကောင်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့သခင်တွေဟာ လူဦးရေအဆမတန်တိုးပွားနေတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ မနေနိုင်တော့တဲ့ ဘင်္ဂလီကုလားတွေကို ရွေ့ပြောင်းအခြေချတဲ့နေရာမှာ ဘယ်လမ်းကြောင်းမျိုးမှာမဆို အသုံးချလို့ရတဲ့ ခြေလျင်စစ်သည်တွေအဖြစ် အသုံးပြုပြီးတော့ မြန်မာပြည်ကို ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ဆက်သွယ်မယ့် ပေါင်းကူးတံတားအဖြစ် အသုံးပြုချင်နေကြပါတယ်။တကယ်လို့ ဗမာတွေကို သိမ်းသွင်းနိုင်ရင် (အကယ်၍ ရခိုင်ကို သိမ်းသွင်းနိုင်ရင် ဗမာပြည်ကိုလည်း သိမ်းသွင်းနိုင်တယ်။ ထူးထူးခြားခြား KNU ထဲကတချို့ဆိုရင် ဒီဘင်္ဂလီကုလားစစ်သွေးကြွတွေရဲ့ မဟာမိတ်တစ်ခုအဖြစ် သိမ်းသွင်းခံရတာမျိုး ရှိခဲ့တယ်။ သူတို့ရဲ့ဗျူဟာထဲမှာ သံသယရှိစရာကောင်းတဲ့အချက်က လူတစ်ဒါဇင်လောက်စုမိတာနဲ့ ၀တ်ပြုဖို့နေရာတစ်ခုကို ရအောင်လုပ်တာမျိုးတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းကို ဦးတည်ဝင်ရောက်ဖို့ လမ်းကြောင်းဖန်တီးနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ချောက်၊ရေနံချောင်း မကွေးလိုမြို့တွေဆီကိုပေါ့လေ။ လောလောဆယ်အနေအထားမှာ သူတို့ရဲ့ဗျူဟာက ရခိုင်ပြည်နယ်ကို demography (သန်းခေါင်စာရင်း) ၀င်ပြီး လူဦးရေတိုးပွားနှုန်းနဲ့ ထိန်းချုပ်ဖို့ ဖြစ်တယ်။ ရခိုင်ပြီးရင် မွန်ပြည်နယ်နဲ့ ကရင်ပြည်နယ်ဆီကို ဦးတည်ထားပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီကုလားတွေသာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကို ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီဆိုရင် နဂိုကတည်းက ဒေသခံစစ်သွေးကြွတွေ လက်ထဲမှာ မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့ ထိုင်းတောင်ပိုင်းဟာ အင်ဒိုနီးရှားကနေ တူရကီ ဒါမှမဟုတ် ဘော်လကန်ဒေသက အုပ်စုတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပထ၀ီအနေအထားအရပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုမှဖြတ်တောက်လို့ မရနိုင်တဲ့ အနေအထားကို ရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မယ်။ အနီးစပ်ဆုံးပြရမယ်ဆိုရင် ကိုဆိုဗိုဒေသဟာ ဆာ့ဗ်တွေလက်ကနေ အယ်ဘေးနီးယန်း အခြေချနေထိုင်သူတွေလက်ထဲ ရောက်သွားတာကိုပဲ ကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့လည်း ဒီပြဿနာမျိုးကို ကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့ မြန်မာတွေအနေနဲ့ အပြင်က၀င်လာတဲ့ မူဂျာဟစ်တချို့ကိုမောင်းထုတ်ဖို့ ဆာ့ဗ်တွေထောင်လိုက်တဲ့ ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ အမေရိကန်သမ္မတ ဘီလ်ကလင်တန်က စေလွှတ်လို့ အဲတုန်းက ဆော်ဒီနဲ့ပြေလည်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မယ်ဒလင်းအောဘရိုက်ရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ ၀င်လာတဲ့ ဗုံးခွဲသမားတွေ တွေ့ခဲ့တဲ့ ပုံစံမျိုး ပြည်တွင်းမှာ အဓိကရုဏ်း ဆူဆူပူပူဖြစ်အောင် မလုပ်မိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတုန်းက မစ္စအောဘရိုက်ဆိုတာ ခုလက်ရှိဘင်္ဂလီကုလားတွေရဲ့ သခင်မ ဘီဘီစီက အင်နာဂျုံးလ်လိုမျိုး အယ်ဘေးနီးယန်းတွေရဲ့ မင်းသမီးတစ်ပါးပေါ့လေ။ အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့သာ ဒီ လက်ထဲက ပြဿနာရဲ့ အရေးကြီးတဲ့အချက် ဒါမှမဟုတ် အရေးယူပိုင်ခွင့်ကို ဆုပ်ကိုင်ဖို့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အားလုံး အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ ဒုက္ခသည်အဖြစ် မိတ်ကပ်လိမ်းငိုပြနေတဲ့ အယ်ဘေးနီးယန်းသူခိုးတွေလက်မှာ မိမိတို့ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့တဲ့ မြေတွေကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင် ဗီလိန်အဖြစ်၊ အနိုင်ကျင့်သူတွေအဖြစ် နာမည်ပျက်ခဲ့ရတဲ့ ဆာ့ဗ်တွေရဲ့ ဘ၀လိုမျိုး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ တကယ့်အဖြစ်မှန်မှာတော့ အဲဒီအယ်ဘေးနီယန်းတွေ ဆာ့ဗ်တွေအပေါ်မှာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးလုပ်ခဲ့တာ အများကြီးရှိခဲ့ပေမယ့် ဘယ်သူမှ သူတို့လုပ်တာကို အဖြစ်မှန်ဖော်ထုတ်ဖို့ အလေးမထားခဲ့ပါဘူး။ ဒါတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ ကမ္ဘာမှာနေထိုင်နေရပါတယ်လို့ စောဒကတက်လို့မရပါဘူး။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဟာငွေနဲ့ပေါက်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ သတင်းလောက၊ အဲဒီသတင်းလောကသားတွေကနေ ထိန်းချုပ်ခံနေရတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ဒါမှမဟုတ် တနည်းအားဖြင့် စောက်ရူးစိတ်ဓာတ်တွေရှိနေတဲ့ ကမ္ဘာမှာ နေထိုင်နေရပါတယ်။ ဓာတ်ပုံထဲကောင်တွေကိုကြည့်ရတာ တကယ်ခွေးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒီလိုကောင်စားမျိုးတွေကို ကျည်ဆန်နဲ့ ပစ်သတ်ဖို့တောင် မတန်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့မမေ့သင့်တာတစ်ခုက ဒီကောင်တွေရဲ့ စစ်ရေးစွမ်းရည်နဲ့၊ တိုက်ရည်ခိုက်ရည်ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာ ရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ။ကိုဆိုဗို (ဘော်လကန်အရေးအခင်း)မှာ Serbian Chetniks အမျိုးသားရေးဝါဒီမဟုတ်တဲ့ ကြေးစားစစ်သားတွေဟာ စစ်ကို ကောင်းကောင်းမတိုက်ခဲ့ပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ဟာ နေတိုးစစ်သားတွေကို ကောင်းကောင်း ကန်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဆာ့ဗ်တွေဟာ ငွေကြေးစစ်ပွဲ (သို့) ၀ါဒဖြန့်စစ်ပွဲမှာ ကျရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ အယ်ဘေးနီးယန်းတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားက ထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်နေပြီး ဘော်လကန်ဒေသတွင်းမှာ အီရန်ရဲ့သြဇာကြီးမားလာမှုကို တုန့်ပြန်နိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြေးစားစစ်သားတွေကြားမှာ တချို့တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၊ မုဒိန်းမှု၊ လူသတ်မှုတွေကို ဆာ့ဗ်တွေ မထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာတွေအနေနဲ့ ဆာ့ဗ်တွေဆီကအတွေ့အကြုံကို သင်ခန်းစာယူပြီး ဒီကိစ္စကို လူမျိုးရေး ဒါမှမဟုတ် ဘာသာရေးကိစ္စအဖြစ် ခေါင်းစဉ်တပ်တာမျိုး လုံးဝမလုပ်ပဲ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ပြဿနာအဖြစ် စနစ်တကျကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း သူ့ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက် ပျက်စီးမှုတွေကို မျက်ခြေမပြတ်လေ့လာပြီး ဒီလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကို အလေးထားကိုင်တွယ်ဖို့ လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဒီပြဿနာကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာ ဦးနှောက်မရှိပဲ ဗရမ်းဗတာလုပ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကျွန်တော်တို့ ဘေးပတ်ပတ်လည်က မျိုးမစစ်တွေကို ၀ိုင်းဆဲခွင့်၊ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခွင့် ပြုလိုက်သလိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာ သတိပြုမိစေလိုပါတယ်။ အဲဒီအနေအထားကိုရောက်သွားရင်တော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်း ဘင်္ဂလီချီးတွင်းထဲ ဇောက်ထိုးမြှုပ်ခံရမယ်ဆိုတာ မမေ့ကြပါနဲ့။ Myanmar Express Read More
From : Shwe Eaim Siအားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ကျွန်မက နိုင်ငံရေးသမားလည်း မဟုတ်၊ အစိုးရဘက်တော်သားလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်နေတာလည်း မဟုတ်ကြောင်း အရင် ပြောပါရစေ။ ပြီးတော့ ကျွန်မဟာ ဘာလူမျိုးခြားသွေးမှ မရောစပ်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်ပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေထိုင်နေကြတဲ့ မွတ်စလင်ဘာသာဝင် အိန္ဒိယ၊ အာရပ်အနွယ်ဝင်တွေကို ထိခိုက်ပြောဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ကြောင်း သဘောပေါက်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ ရှိကြတဲ့ အိန္ဒိယ၊ တရုတ် လူမျိုးတွေ လူမျိုးခြား လူနည်းစု အနေနဲ့ ဧည့်နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားအဖြစ် နေထိုင်နေကြတာ မြန်မာတိုင်း အသိပါ။ နယ်မြေချင်းထိစပ်နေလို့ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ ရခိုင်နယ်စပ်မှာ ၀င်ရောက်နေထိုင်နေကြတာကို ဘာမှ မပြောလိုပေမယ့် သူတို့ကို လူမျိုးတမျိုးအဖြစ် သတ်မှတ်ဖို့၊ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အလမ်းတွေ ပေးဖို့၊ ရခိုင်ပြည်ဟာ သူတို့နယ်မြေပုံစံ ပြောဆိုလာတာမျိုးတွေကြောင့် ဒီရိုဟင်ဂျာအရေးကို ကန့်ကွက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပို့စ်ကို တင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်း ဒီ သမိုင်းကြောင်းတွေ လျှောက်လိမ်၊ နိုင်ငံတကာကို လျှောက်လိမ်ပြီး သူတို့ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်က လူမျိုးတမျိုးပုံစံ၊ ရခိုင်နန်းတွင်းမှာတောင် အရေးပါတဲ့လူမျိုးတွေ ပုံစံမျိုး ပြောဆို လိမ်လည်လာကြတာကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း ပြောချင်ရုံပါပဲ။ ဒီလို လက်မှတ်ထိုး ကိုယ့်ဆန္ဒကို ဖော်ထုတ်ပြသမှုဟာ ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်း ကျွန်မ မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ကျွန်မတို့ မြန်မာတိုင်းရင်းသား မဟုတ်ကြောင်း၊ ရခိုင်လူမျိုးများနဲ့ ဘာမှ ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှု မရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ နေထိုင်လာတာ ကြာကောင်းကြာပြီဖြစ်နိုင်ပေမယ့် သူတို့ဟာ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးက ဘင်္ဂါလီလူမျိုးပဲ ဆိုတာကို အမှန်အတိုင်း တရားမျှတစွာ ပြောချင်ရုံသပ်သပ်ပါ။ဒီရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေကို ကျွန်မလိုပဲ မြန်မာအများစုက သိဖို့နေနေသာသာ ကြားတောင် ကြားဖူးကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပြည်ပမီဒီယာတိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့သတင်းတွေကို အသားပေးဖော်ပြလာလို့ သတိထားမိလာတာပါ။ အစက ရိုဟင်ဂျာဆိုတာကို ဘာကို ပြောမှန်းတောင် မသိပါဘူး။ နောက်မှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ဘင်္ဂါလီကုလားတွေဖြစ်မှန်း သိရတာ။ဒီပြည်ပသတင်းဌာနတွေက သတင်းဟာ သတင်းပဲ ဆိုပြီး ရိုဟင်ဂျာသတင်းတွေကို အားရပါးရ အပြိုင်အဆိုင် ကြေငြာ ရေးသားကြ၊ ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေနဲ့ အင်တာဗျူးတွေ လုပ်ကြ၊ ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကို သဲသဲလှုပ်အရေးတယူ ရှိသလောက်၊အခု ဒီရိုဟင်ဂျာတွေဟာ မြန်မာတိုင်းရင်းသား မဟုတ်ပါဘူး၊ တိုင်းရင်းသားအဖြစ်လည်း အသိအမှတ်မပြုနိုင်ပါဘူးလို့ ကျွန်မတို့ အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်နေကြတာကိုတော့ သတင်းအဖြစ် မတင်နိုင်ကြတာကို အံ့ဩလောက်အောင် တွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်း ဒီအရေးကိစ္စဟာ သာမန် လျစ်လျုရှု သင့်တဲ့၊ မသိလိုက် မသိဖာသာ နေသင့်တဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်ကြောင်း၊ မြစ်ဆုံအရေးလိုပဲ အရေးကြီးလှတဲ့ အမျိုးသားရေးသာဖြစ်ကြောင်း မြန်မာတိုင်းကို သိစေချင်ပါတယ်။မြစ်ဆုံဆည်ကိစ္စတုန်းက လူမျိုးရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာတွေ ဘာသံမှ မထွက်လာဘဲ တရုတ်တွေကို ပြောကြဆိုကြ၊ ကန့်ကွက်ကြနဲ့ အားရစရာကောင်းသလောက် ဒီရိုဟင်ဂျာအရေးမှာတော့ လူမျိုးရေးဆိုတာတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ အသံတွေနဲ့အတူ တုပ်တုပ်မျှ မလှုပ်ကြတာကို နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်မိတယ်။FaceBook သုံးနေသူအများစုကတော့ ရိုဟင်ဂျာအရေး ဘယ်က စ တယ်ဆိုတာ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘီဘီစီရဲ့ ဆောင်းပါးတခုမှာ ဖော်ပြထားသော မြန်မာပြည်မြေပုံနဲ့ ပတ်သက်နေပါတယ်။ အဲဒီဓာတ်ပုံထဲမှာ ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကို ဘယ်လောက်တောင် မြန်မာလူမျိုးစုထဲ ထည့်ထားချင်တယ် မပြောတတ်ဘူး။ အထင်ကရ လူမျိုးကြီးဖြစ်တဲ့ ရခိုင်လူမျိုးကို ထည့်ဖို့ မေ့ခဲ့တဲ့အထိ၊ ပြီးတော့ တရုတ်အနွယ်ဖြစ်တဲ့ ၀ လူမျိုးဆိုတာကိုလည်း ထည့်ထားလိုက်သေး။ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံကြီးတော့ အထက်ပိုင်းက တရုတ်၊ အောက်ပိုင်းက ဘင်္ဂါလီကုလားတွေနဲ့ အရမ်းကို ပဏာရနေမှာ မြင်ယောင်မိတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံသားများဟာ အာဏာပါဝါကို လက်ကိုင်ထားပြီး ငွေမျက်နှာ တခုတည်းကြည့်ကာ နိုင်ငံကို လက်ညှိုးထိုးရောင်းစားသူများနဲ့ ဘာမှ သိပ်မကွာတဲ့ အာဏာမရှိသော်လည်း ကိုယ့်အခွင့်အရေးနဲ့ ပိုက်ဆံရဖို့အတွက် မျောက်ပြ ဆန်တောင်းနေကြသူများ အလယ်က မြေစာပင်တွေဆိုတာကို ကျွန်မ ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်သွားခဲ့ပြီ။ကြားထဲက ငထွား ခါးနာရသူများကတော့ မြန်မာပြည်သူများနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံရတဲ့၊ ဘ၀တွေ စုတ်ပြတ်သပ်သွားသော်လည်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တော်လှန်နေသေးသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၊ တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်မြတ်နိုးသူများသာဆိုတာ…ဒီရိုဟင်ဂျာအရေးကြောင့် ကျွန်မတို့တွေ မျောက်ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်နေခဲ့တာကို ခုမှ နားလည်သွားရတဲ့အတွက်တော့ ဘယ်သူ့ကိုမှန်းမသိ ကျေးဇူးတင်မိတယ်။အဆုံးသပ်ရရင်တော့ ဒီရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေကို မြန်မာတိုင်းရင်းသား လူမျိုးတမျိုးအနေနဲ့ ဘယ်လိုမှ အသိအမှတ်မပြုနိုင်ပါဘူးရိုဟင်ဂျာသည်မြန်မာတိုင်းရင်းသား မဟုတ်ကြောင်းနိူင်ငံတကာ သိစေရေးကိုဆောင်ရွက်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းရင်းဒီနေရာလေးကို..မန်ဘာဝင်ပေးရင်း...အတူတကွတိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့ .ရိုဟင်ဂျာသည်မြန်မာတိုင်းရင်းသား မဟုတ်ကြောင်းနိူင်ငံတကာ သိစေရေးhttp://www.facebook.com/groups/338102759577684/ချစ်ခင်စွာMyanmar Express
မသစ်လွင်၊ မထူးခြားတဲ့ လိမ်ဆင်တွေနဲ့ သစ်ထူးလိမ် ဘလော့က သတင်းမှားတွေကို ဆက်တိုက် တင်ခဲ့ပြီး လူအတော်များများလည်း အလိမ်ခံရမှန်းမသိ အလိမ်ခံနေရပါတယ်။ အထောက်အထားမရှိ၊ သက်သေ သာဓက မရှိတဲ့ အမည်မဖော်လိုသူ များရဲ့ ပေးစာ၊ ပစ်စာ မျိုးဆုံ ကို ဖြန့်ဝေလျှက် ရှိရာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ လ က သစ်ထူးလွင် နဲ့ ဒီမိုဝေယံ တို့မှ ဦးကျော်ဆန်း တို့ကို အနားပေးကြောင်း လုပ်ကြံ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပေမယ့် ဒီနေ့ထိ အနားပေးခံရခြင်း မရှိကြောင်း သိရပြီး လိမ်ညာထုတ်လွှင့်ခဲ့သူများကလည်း တာဝန်ယူခြင်း၊ ဖြေရှင်း တောင်းပန်ခြင်း မရှိသလို.. ရှက်တတ်ခြင်း လုံးဝ မရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ Myanmar Express
နိုင်ငံတော်နှင့် တပ်မတော်၏ သဘောထားအမှန်ကို သိမြင်၍ တောတွင်း လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ အလင်းဝင်ရောက်
နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံး၏ အန္တရာယ်ဖြစ်သော မူးယစ်ဆေးဝါးကို အမျိုးသားရေးတာဝန် တစ်ရပ်အနေဖြင့် တစိုက်မတ်မတ် ထိထိရောက်ရောက် တိုက်ဖျက် နှိမ်နင်းလျက်ရှိပါသည်။ တာချီလိတ်နယ်မြေအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးကင်စင်ရေးအတွက် တစ်မတော်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ဒေသခံပြည်သူများ ပူးပေါင်းလျက် သတင်းဖော်ထုတ် ပိတ်ဆို့ရှင်းလင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ မူးယစ်တရားခံပြေး စိုင်းနော်ခမ်းအဖွဲ့နှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ဧပြီလအထိ ထိတွေ့မှု ၃ ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ စိုင်းနော်ခမ်းအဖွဲ့ အနေဖြင့် အဖွဲ့ငယ်များ ခွဲ့၍ ထွက်ပြေးလျက်ရှိရာမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၃ ရက်တွင် အိုက်ထွန်းခေါင်းဆောင်သော အင်အားရှစ်ဦးသည် လက်နက်မျိုးစုံ ၅ လက်၊ ကျည်မျိုးစုံ ၁၆၃ တောင့်၊ ဗုံးသီး ၁၀ လုံး၊ ရှေ့ထွက်မိုင်း ၁ လုံးတို့ နှင့်အတူ တာချီလိတ်နယ်မြေ မိမိတပ်မတော်တပ်စခန်းသို့ ဆက်သွယ်၍ အလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အဖွဲ့အား တပ်မတော်မှ ၎င်းတို့မိသားစု ဘဝလုံခြုံရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည်များ ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းပေးရန် စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
တဏှာရူး သွန်းနေစိုး အား ကာမလိမ်လည်မှု့ဖြင့် မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ရဲစခန်းတွင် စစ်ဆေး
ဂမ္ဘီရစာရေးဆရာ ဒဿကျော်စွာ ( ခ ) သွန်းနေစိုး (ဂ) နှာခေါင်းကြီး အား ကာမလိမ်လည်မှုဖြင့် မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ရဲစခန်းမှ ဖမ်းဆီးထားကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။ ကာယကံရှင် မိန်းကလေး ၏ ဖခင်ကိုယ်တိုင်က တိုင်ကြား အမှုဖွင့်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး Hot news ဂျာနယ်မှအယ်ဒီတာချုပ် မမ မှ ရဲစခန်းသို့ သွားကာ တဏှာရူး သွန်းနေစိုးအား အာမခံပေးနေကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။ ဒီလဆန်းပိုင်းကလည်း အရှင်ဂမ္ဘီရ လည်း အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အတင်းသွားတောင်းလို့ အရိုက်ခံခဲ့ရပြီး သွန်းနေစိုးကတော့ ဒီလအတွင်း ဒုတိယ မြောက် ဖြစ်ပါတယ်။တဏှာရူး သွန်းနေစိုးရေးသားခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါး ခေါင်းစဉ်အချို့ကတော့ "မင်းကိုနိုင် (သို့) ဒီမိုကရေစီ သူရဲကောင်း" ။ "မင်းကိုနိုင်၏ ဒီမိုကရေစီဖဲကြိုးဖြတ် ခရီးရှည်" ။ "ထူးဆန်းအံဖွယ်ကောင်းလှစွာသော အကယ်ဒမီ" ။ "ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သို့မဟုတ် မြန်မာ့ ကျက်သရေဆောင်" ။ "ဇာဂနာ သို့မဟုတ် လူထုအော်လံ " စတဲ့ ဆောင်းပါးတွေဖြစ်ပါတယ်။သွန်းနေစိုး ဟာ ယခင်က လူရိုးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်း၊ မင်းကိုနိုင်အကြောင်း နဲ့ ဇာဂနာ တို့အကြောင်းတွေ လေ့လာပြီးနောက် တဏှာစိတ် ငယ်ထိပ်ရောက် သွားကြောင်း နီးစပ်သူများက ပြောကြပါတယ်။ NLD ပါတီဝင်ဟောင်းတစ်ဦး ဖြစ်သူ ရဲဘော် အောင်ထက် ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း တဏှာကြီးသူ တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ဒီချုပ်နဲ့ လမ်းခွဲရှင်းတမ်းမှာ ရေးသားခဲ့ဖူးပါတယ်။ Myanmar Express
ပြည်သူကို မိုင်းထောင်သတ်ဖြတ်၊ အတင်းအဓ္ဓမ လူသစ်စု ရှမ်းလူမျိုးတွေကို ရှေ့နေအသေခံခိုင်း ပန်ဝါဒေသကို ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ အကြမ်းဖက်သမား KIA
KIA တပ်များသည် ကချင်ပြည်နယ်လွတ်လပ်ရေးကို အကြောင်းပြပြီး ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းတွင် အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါတယ်။ လူစည်ကားရာ မြို့များတွင် ပြည်သူများ ထိခိုက်သေဆုံးစေရန် မိုင်းခွဲခြင်း၊ အတင်းအဓ္ဓမလူသစ်စုခြင်း၊ အများပြည်သူ သွားလာရာ လမ်းများတွင် မိုင်းထောင်ခြင်း၊ ဆက်ကြေးကောက်ခံခြင်း စသော အကြမ်း ဖက်လုပ်ရပ်များကို အဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်နေ ကြပါတယ်။ဒေသအတွင်း အစိုးရတပ်များ မလာနိုင်အောင်ဆိုသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ပြည်သူများသွားလာနေသော တံတားများကို ဖျက်ဆီးနေကြသည်မှာ ၂၀၁၁ ဇွန်လမှ ယနေ့အထိ တံတားအစင်းပေါင်း ၁၁၅ စင်း အားဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကချင်လူမျိုးများနေထိုင်ရာ မြစ်ကြီးနား မြို့တွင်လည်း မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲမှု ကြောင့် လူ ၂၀ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရနှင့်တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှ ယနေ့အထိ မိုင်းဖောက်ခွဲမှု ၇၁ ကြိမ်၊ လူသစ်စုဆောင်းမှုအနေဖြင့် ၈၈၂ ယောက်ကိုစုဆောင်းခဲ့ပါတယ်။ လူသစ်စုဆောင်းရာတွင် အရွယ်မရောက်သေးသော ကလေးငယ်များ အားလည်း အတင်းအဓ္ဓမ လူသစ် စုဆောင်းပြီး လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲစေခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားများ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေသော ရွှေမှော်များအတွင်း ဆက်ကြေး ကောက်ခံခြင်း၊ လမ်းသွား လမ်းလာများမှ လည်း ဆက်ကြေး ကောက်ခံခြင်းများကို လည်း အရှိန်မြှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း လူမျိုးကြီးဝါဒကို အကောင် အထည်ဖော်ကာ ဂျိန်းဖောလူမျိုးမှ အပ ကျန်လူမျိုးများ နေထိုင်ရာ ကျေးရွာများကိုလည်း ရွာလုံးကျွတ်သတ်ဖြတ် မီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။ ခရမ်းထီးခမ်းရွာ ဖျက်ဆီးမှုတွင် လချိတ်လူမျိုး ၁၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး ရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ KIA တပ်များအတွင်းမှာလည်း ဂျိန်းဖောလူမျိုးမှ အပ ကျန်လူမျိုးများကို နှိပ်စက်ခြင်း၊ ရှမ်းလူမျိုးများကို အသေခံတိုက်ခိုင်းခြင်း၊ ရှမ်းလူမျိုး မိန်းကလေးငယ်များကို မုဒိန်းကျင့် စတဲ့ လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှုများကြောင့် KIA တပ်များမှ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများမှာ အစိုးရထံ အဆက်မပြတ် အလင်းဝင်လျက် ရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ ဒီလို အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးပြီး ကချင်တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များထံ ငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းကာ ဆွေးနွေးခဲ့သည်မှာ အလွတ်သဘောဖြင့် ၁ ကြိမ်၊ ပြည်နယ်အဆင့် ၃ ကြိမ်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဆင့် ၃ ကြိမ်၊ စုစုပေါင်း ၇ ကြိမ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြိမ်ပေါင်းမြောက်များစွာ အစိုးရမှ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေးရှုပြီးလိုက်လျောခဲ့ပေမယ့် မဖြစ်နိုင်သော ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲမည့် တောင်းဆိုချက်များကို တောင်းဆိုကာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လစ်လျူရှုခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းကလည်း ပန်ဝါဒေသရှိ နယ်ခြားစောင့်တပ် အမှတ် (၁၀၀၂)ကို အင်းအားမမျှတစွာ အတင်းအဓ္ဓမ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ကာ ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ရန် ကြိုးစားလျက်ရှိပါတယ်။ ဧပြီလ ၂၇ ၇က်နေ့ နံနက် ၃ နာရီခန့်က KIA ဗဟိုဌာနချုပ်မှ ခေါင်လွမ်ဦးစီး အင်အား ၂၀၀ ခန့်ဖြင့် အမှတ် (၁၀၀၂) နယ်ခြားစောင့်တပ်ရဲ့ ရှေ့တန်းကင်းနေရာဖြစ်သော ရှဖုတ်ကို ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ KIA ဘက်မှ လူ၂၀ ခန့်ကျဆုံးပြီး၊ ၁၅ ဦးခန့် ဒဏ်ရာရခဲ့ကာ ဆုတ်ခွာသွားခဲ့သည်။ ၄င်းနောက် ခစတ (၁၀၀၂) ဌာနချုပ်နှင့် ပန်ဝါမြို့နယ်အား ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ရန် ပြင်ဆင်နေပါသည်။ ခစတ (၁၀၀၂) အားတိုက်ခိုက်သည့်အပြင်၊ စင်ကြိုင်ရှိ ခစတ (၁၀၀၃) ကိုလည်း KIA တပ်မဟာ ၁ မှ အင်အား ၁၅၀ ဦးခန့်ဖြင့် တိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်နေစဉ် ဘွန်ဆင်စခန်းမှ လှုပ်ရှားအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံကာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ KIA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ပန်ဝါနှင့် ကန်ပိုက်တီးမှ ရွာသား( ၃၀၀၀ )ခန့် သည် တစ်ဖက် တရုတ်နိုင်ငံသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါသည်။KIA တပ်များအတွင်းတွင်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားသော အခြားကချင် တိုင်းရင်းသားများ ရှိသော်လည်း ခေါင်းဆောင် များမှာ ဂျိန်းဖောလူမျိုးများ ဖြစ်နေသောကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူရန် အခက်တွေ့နေကြပါသည်။ ၄င်းအပြင်ထွက်ပြေးသော တပ်သားများကိုလည်း လိုက်လံ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ထွက်ပြေးသူများဖမ်းမမိပါက မိသားစုများအား သတ်ဖြတ်ခြင်းတို့ကြောင့် အလင်းဝင် လိုသော်လည်း မိသားစုအရေး ငဲ့ညှာနေကြောင်း သိရပါသည်။KIA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများသည် အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းချက်များကို လစ်လျူရှုခြင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ပြည်သူများကို နှိပ်စက်ခြင်း၊ မိုင်းထောင်သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဆက်ကြေးများ မတရား တောင်းခံခြင်း၊ အရွယ်မရောက်သေးသူများ အပါအ၀င် အတင်းအဓ္ဓမလူသစ်စုခြင်းနှင့် အရွယ်ကောင်း အမျိုးသမီးများအား လူမဆန်စွာ မုဒ်ိန်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခြင်းများကြောင့် ဒေသများမှ KIA အဖွဲ့အား ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့် ရွံ့ရှာနေကြောင်း ကချင်ပြည်သူများမှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Myanmar Express
မွတ်ဆလင် ပါတီ တည်ထောင်မယ့် ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်း မြအေးနဲ့ သမီး ဝေနှ
၈၈ ကျောင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့မှ မွတ်စလင် မြအေးသည် နိုင်ငံတကာတွင်ရောက်ရှိနေသော မြန်မာနိုင်ငံသား မွတ်စလင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော Oversea Burma Muslin ( OBM ) အဖွဲ့၏ ကူညီထောက်ပံ့မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အစ္စလမ်ဘာသာဝင် ကျောင်းသားလူငယ်များဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီ အသစ်တစ်ခုအား ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပါတီဖွဲ့စည်းရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များ၏ ဘာသာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးများ၊ စီးပွားရေးများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဥပဒေကြောင်းနှင့် အညီ ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ပေးရန်နှင့် မွတ်စလင်များ မြန်မာတန်းတူ အခွင့်အရေးရစေရန်၊ ရိုဟင်ဂျာများ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလွတ်လပ်စွာ သွားလာလှုပ်ရှားခွင့် ရစေရန်တို့ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဖွဲ့စည်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ OBM အဖွဲ့ဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားနေတဲ့ မြအေးရဲ့သမီး ဝေနှင်းပွင့်သုန်ကို ကူညီထောက်ပံ့မှုများပေးနေတဲ့ အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။
၈၈ ကျောင်းသားဟောင်း မြအေးဟာ ရန်ကုန်သားဖြစ်ပြီး ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ သင်္ချာအထူးပြုဖြင့် ဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်မှာပဲ စန္ဒာဝင်းနှင့် အိမ်ထောင်ကျပြီး သားသမီး ၂ ဦး ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ ၈၈၈၈ အရေးအခင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိပဲ မူဆလင်များ ပါတီဖွဲ့ကာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသားခေတ်စားတဲ့ ကာလမှာ မွတ်စလင်နာမည်မတပ်ပဲ ကျောင်းသားနာမည်တပ်ပြီး ပါတီထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ထောင်ကျခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာတော့ ထောင်က ပြန်လွတ်လာပြီး ၁၀ လောက်နိုင်ငံရေးမလုပ်ပဲ ငြိမ်နေခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာ သူ့သမီး ဝေနှင်းပွင့်သုန်ကို အင်္ဂလန်လွှတ်ပြီး ပညာသင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ ဝေနှင်းပွင့်သုန်ဟာ အင်္ဂလန်မှာ အမြဲတမ်းနေနိုင်ဖို့ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ မြအေးဟာ သမီးလျှောက်ထားချက်ခိုင်လုံအောင် ၈၈ ကျောင်းသားအဖွဲ့က ကိုက်ိုကြီးနဲ့ ပေါင်းပြီး စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကို ဆန္ဒပြရင်း ထပ်မံဖမ်းဆီးခံရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁၃ ရက်နေ့မှာ သမ္မတ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်လွတ်လာ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြအေးဟာ ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်း မဟုတ်ပါဘူး။ မွတ်စလင်လူမျိုးတွေ ကောင်းစားဖို့အတွက် ပါတီထောင်ပြီး နိုင်ငံရေးကို ၈၈ ကျောင်းသားယောင်ဆောင်ပြီး ၀င်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
မြအေးသမီး ဝေနှင်းပွင့်သုန်လဲ မထူးပါဘူး။
မိဘတွေက ကျောင်းတတ်ဖို့ လွှတ်လိုက်တာ.. ကောင်းကောင်းမတတ်ပဲ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ မြအေး ကလည်းယုတ္တိရှိအောင် နိုင်ငံရေးသမား ယောင်ယောင်လုပ်လိုက်တာ ထောင်နန်းစံသွားရပါတယ်။ ဝေနှင်းပွင့်သုန်ဟာ အင်္ဂလန်မှာလည်း ကောင်းကောင်းမနေပါဘူး.. ယူကေမှာရှိတဲ့ မွတ်စလင်တွေ ထောက်ခံချက်နဲ့ မွတ်စလင်အများအပြားပါဝင်တဲ့ ဘားမားကမ်ပိန်း ယူကေမှာ ၀င်ပြီးတော့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ဘားမားကမ်ပိန်းမှာ နေရာရအောင် ဒါရိုင်တာ Mark Farmaner ကို ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ ရင်းပြီး နေရာယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲအချိန်မှာ ဖဒိုမန်းရှာရဲ့ သမီး ဇိုးရဖန်က Mark Farmaner ရဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို လွယ်ထားရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝေနှင်းပွင့်သုန်ဟာ ဇိုးရာဖန်းကို မထောက်ထားပဲ Mark Farmaner နဲ့ ဖောက်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုပြီး ရူးကြောင်ကြောင် အလုပ်ဖြစ်တဲ့ ပေ ၁၆၀ လောက်အမြင့်ကနေ ခုန်ချခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအတွက်ခေါင်းစဉ်ပြပြီး နိုင်ငံတကာမှာ အကူအညီ အထောက်အပံ့တွေ တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီငွေတွေက မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားတွေဆီ မရောက်ပဲ မွတ်စလင်လူမျိုးများ ကောင်းစားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီငွေတွေနဲ့ ပြည်ပ အသံလွှင့်ဌာနတွေကို လာဘ်ပေးပြီး မွတ်စလင်မျိုးတူတွေ ဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို မြန်မာနိုင်ငံသားပါဆိုပြီး အတင်းသမိုင်းကို လိမ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြောရရင်တော့ မွတ်စလင်တွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီကတော့ တစ်ခြားစီပါပဲ။ မွတ်စလင်ဆိုတာ အစွန်းရောက်တဲ့ လူမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲမှာ မွတ်စလင်တွေ ပါလာမှာကိုတော့ မြန်မာလူမျိုးတိုင်း မလိုလားပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေ မြန်မာ့လူမျိုးပျောက်ကွယ်အောင် လုပ်နေတဲ့ မွတ်စလင်ကုလားတွေကို မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ အရေး ကြိုးစားနေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမား အမည်ခံမွတ်စလင်တွေကို ထောက်ခံအားပေးတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လိုအကြောင်းတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ မသိနိုင်ပေမယ့် ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်း ကုလားဆင်မင်းကိုနိုင်ကတော့ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်ကုလားတွေကို မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ လွှတ်တော်မှာ NLD ပါတီကို အသုံချပြီး တောင်းခံပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီလိုပြောတာကိုလည်း မင်းကိုနိုင်က ပြည်သူတွေကြားမှာ မကြေငြာရဲပါဘူး။ စည်းရုံးရေးကာလမှာ စင်ပေါ်တက်ပြီး ဒီလိုမျိုး ရိုဟင်ဂျာဟာ မြန်မာလူမျိုးလို့ ပြောရင် မင်းကိုနိုင် အလောင်းတောင် ပြန်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာလူထုက လုံးဝလက်မခံတဲ့ စကားကို ပြောမိလို့ လူထုဝိုင်းဝန်းဒဏ်ခတ်တာကို ခံရမှာ မလွဲပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံက ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ဆိုရင် မွတ်စလင်ကုလားကို လုံးဝလက်မခံတဲ့ မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဗလီဆောက် ဗလီဖျက်။ အိမ်ဆောက်အိမ်ဖျက်နဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် အရမ်းပြင်းထန်တဲ့ မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေက ၀ိုင်းဝန်းကန့်ကွက်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်ကုလား ကိစ္စကို ကြိုးစားနေတဲ့ မင်းကိုနိုင်က မျိုးချစ်စိတ်မရှိတာလား။ ဒါမှမဟုတ် ပိုက်ဆံရလို့ လုပ်နေတာလား။ ကုလားသွေးပါလို့ လုပ်တာလား ဆိုတာတော့ မင်းကိုနိုင်ပဲ အသိဆုံးနေမှာပါ။ နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်မယ် ဆိုတာ ကုလားတွေကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သွတ်သွင်းဖို့ ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပဲ မြင်မိပါတယ်။
ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးတော့ လုပ်ပါ။ မျိုးချစ်စိတ်လေးတော့ မွေးပါလို့ ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်းများကို ပြောချင်ပါတယ်။ မင်းကိုနိုင်နဲ့ မြအေးတို့က ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စကို ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာ ကျန် ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်းတွေ မတားကြဘူးလား။ မြန်မာပြည်ကို ရိုဟင်ဂျာပြည်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေတာကို မြန်မာမျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့ ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်းတွေက မကန့်ကွက်ဘူးလား။ အစွန်းရောက် မူစလင်ရိုဟင်ဂျာတွေကို အားပေးထောက်ခံမယ်ဆိုရင် မွတ်စလင်ပါတီ တစ်ခုဖွဲ့မယ်ဆိုရင် ပါတီရုံးဖွင့်မယ့်အိမ်ကို လူထုက ဖျက်ဆီးဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။ အရိုးနဲ့ အသား တစ်ခြားစီ ဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်းအဖွဲ့ဟာ မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် ကုလားတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာကို ပြည်သူတွေကို အသိပေးလိုက်ပါရစေ။
ထောက်ခံနေတဲ့ ပြည်သူတွေကလည်း မွတ်ဆလင်အနွယ်တွေပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်။ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် ရိုးရှင်းစွာ လျှောက်လှမ်းပြီး လူမျို၍ လူမျိုးတုန်းမည့် အရေးဖန်တီးနေသည့် ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်းများအား မျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးမှ ၀ိုင်းဝန်းဆန့်ကျင် မျက်ကွယ်ပြုသွားရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါသည်။
ကျည်ကာ အရေပြား ထုတ်လုပ်မှု မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်သန်းလာ
From : MRTV-4 နယ်သာလန် နိုင်ငံမှ မှုခင်း ဆေးပညာ သိပ္ပံရှိ သုတေသန ပညာရှင်များမှာ လူတို့ ဖန်တီးထားသည့် စူပါ အရည်ပြား တစ်မျိုး၏ ခံနိုင်စွမ်းအားနှင့် ပတ်သက်ပြီး စမ်းသပ်မှု တစ်ခု ပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကာ ယင်းအရေပြားတုတွင် လူသားတို့၏ ဆဲလ်နှင့် ပင့်ကူများမှ ပိုးမျှင်များကို ပေါင်းစပ် ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ပွိုင့် .၂၂ ရှိ ကျည်ဆန်ဖြင့် အဆိုပါ အရေပြားကို ပစ်ခတ် စမ်းသပ်ချက် အရ အဆိုပါ အရေပြားမှာ ပေါက်ပြဲသွားခြင်း မရှိဘဲ အောင်မြင်သည့် စမ်းသပ်မှု တစ်ခုအဖြစ် ကြေငြာနိုင်ခဲ့ကြောင်း euronews သတင်းတွင် ဖော်ပြသွားခဲ့သည်။ source : euronews.com Myanmar Express
ကန်တုံ၊ ရန်ရန်ချမ်း၊ အနဂ္ဂ နဲ့ သံသာရေ၊သူငယ်ချင်းတို့ရေ ကိုယ်ပါကွ။ နေပြည်တော်ရွှေမြိှု့တော်ရဲ့ ပုပ္ဗသီရိမြိှု့နယ်က အမတ်မင်း ဖြိုးဇေယျာသော်ပါကွ။ နယ်နယ်ရရ မှတ်သလားဟေ့ မဲလာပေးတဲ့ ၄၆၆၇၁ မှာမှ ကိုယ်က ၂၃၆၅၁ မဲနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တာပါ။ အမတ်လောင်းဘ၀ကနေ အမတ်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ ကိုယ်ရဲ့ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးကို အလေးချိန်ကို မင်းတို့ စဉ်းစားမိသလား၊ နေပြည်တော်ဆိုတဲ့နေရာက အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေကတောင် ပေးလိုက်ကြတဲ့မဲဆိုတော့ နှယ်နှယ်ရရအောင်မြင်မှုမဟုတ်ဘူးတဲ့ အမေစုမြွက်ကြားခဲ့သလိုဘဲ ကိုယ်တော့ သေသေချာချာလုပ်ရတော့မယ်။ခုလောလောဆယ်မှာတော့ သင်္ကြန်အတွင်းမှာဘဲ လုပ်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ရုံးချုပ်မှာ ကိုယ်အပါအ၀င် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ပို့ချတဲ့ ဥပဒေသင်တန်း၊ ပဋိပက္ခ ဖြေရှင်းခြင်းနည်းလမ်း၊ အလုပ်သမားဥပဒေ၊ လယ်ယာဥပဒေ၊ ရပ်ကွက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဥပဒေသင်တန်းတွေကို တက်နေရတယ်ကွာ။ မင်းတို့ကတော့ ရေစိမ်ခံပြီး ဇိမ်ကျနေမှာ မလိုနာဘူးကွာ။ကိုယ်က ကိုယ်တတ်ထားတဲ့အနုပညာနဲ့ ပြည်သူတွေ၊ ၀န်ကြီးဌာနတွေမှာ စိတ်မလန်းဆန်းဘဲရှိနေကြတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကို စိတ်အပန်းပြေအောင် တတ်ထားတဲ့ အနုပညာနဲ့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းက အလုပ်အကျွေးပြုဖို့ ရည်ရွယ်ထားတာကွ။ ဒါကြောင့် ဒီသင်တန်းတွေဟာဖြင့် ကိုယ့်အတွက် နည်းနည်းတော့ ကသိကအောင့်ဖြစ်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အနိုင်ရအမတ်အားလုံးထဲ ကိုယ်ကအငယ်ဆုံး၊ ဖင်အပေါ့်ဆုံးက ရှေ့ဆုံးက ငိုက်နေရင်မကောင်းတာနဲ့ စိတ်ထဲက သီချင်းစပ်ရင်းဘဲ သကြံန်ရက်တွေကို ကုန်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ပြီးရင်တော့ ကိုယ်မဲဆနနယ်မြေမှာ ငွေကြေးကိစ္စတွေကို အပြီးသတ် လုပ်ထားရဦးမယ်။ အဲဒီငွေကြေးကိစ္စ တွေကို သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်ကော်မရှင်တွေမှာ ကျမ်းကျိန်တာတွေ လုပ်ရဦးမယ်။ ကိုယ်ကတော့ လွှတ်တော်တက်ဖို့ဘဲ အာရုံရှိတယ် ဟေ့ကောင်ရေ။ ဆွေမျိုးတွေကလည်း ကိုယ်ဟာ လွှတ်တော်ထဲမှာ အငယ်ဆုံး၊ အလားအလာအရှိဆုံးဖြစ်လာမယ်ဆိုပီး ပြောနေတာနဲ့ ရင်တွေတောင် ခုန်နေတာကွ။လွှတ်တော်ထဲမှာတော့ အမေစု ထိုင်ဆိုထိုင်၊ ပြောခိုင်းတာပြောရမှာပေါ့ကွာ။ အမေစုက ဒီမိုကရေစီသာအော်နေတာ၊ သူက ဒါလုပ်ဆို လုပ်မှကြိုက်တာ၊ နွားရှေ့ထွန်ကြူုးသလားဆိုပီး ပြောသေးတာကွ၊ နိုင်ငံခြားမှာအနေကြာလာတော့ စကားပုံတွေဘာတွေ သိပ်မခိုင်းနှီုင်းတတ်ဘူးပေါ့ကွာ။အေး၊ ခုတော့ အမေစုက ဦးညဏ်ဝင်းနဲ့ ခေါင်းကြီးလို့ခေါ်တဲ့ ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်တို့ စကားနားယောင်ပြီး လွှတ်တော်မတက်သေးဘူးဆိုပီး လုပ်နေပြန်ပီဟေ့ကောင်ရေ။ လွှတ်တော် ထဲသွားတဲ့အခါ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်ဟာ ပုဒ်မ ၁၂၅ အရ ဇယား (၄) ပါစာသား ကို ဥက္ကဌရှေ့မှာ ကျမ်းကျိန်ရမယ်။ အဲဒီမှာပါတဲ့ စာသား ““ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမည်”” ဆိုတာနဲ့ ““ လေးစားလိုက်နာပါမည်”” ဆိုတဲ့ စကားရပ် ၂ခု ၀ိဝါဒ ကွဲနေတာကြောင့်ပါကွာ။ငါရယ်၊ ကျန်တဲ့ အမတ် ၃၀ လောက်ရယ်က လွှတ်တော်ထဲ သွားချင်နေပါပီကွာ။ ကိုယ့်ကို အမတ်အဖြစ် တင်ထားတဲ့ ပြည်သူတွေကို ခေါင်းပေါင်းစတလူလူနဲ့ ပုံစံတော့ ပြသင့်တယ်မဟုတ်လား။ ပြီးတော့ကွာ၊ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို စွန့်ပြစ်၊ ရွှေဂုံတိုင် ကြေညာစာတမ်းကို စက္ကူစုတ်လုပ်ပြီး ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အောက်က ကျင်းပတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကိုတောင် ၀င်ခဲ့ပြီးမှ အခု ဒါလေးကို ဘာလို့ ကပ်သပ်ငြင်းခုန်နေကြတာလဲ။ အမေစုက စကားကတော့ အောင်တယ်ဗျ၊ ဆန်ရှင်ရုတ်သိမ်းဖို့ လာတဲ့ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ်ကင်မရွန်ကိုတောင် ဆိုင်းငံ့ဖို့ဘဲလုပ်ပေးဖို့ ပြောနိုင်တာကိုဘဲကြည့်လေ။ အဲဒီ ကြေညာချက်လည်းရရော အမေစုက စကားလုံး သေးသေးလေးကအစ NLD ပြောလို့ ပြင်ရတယ်ဖြစ်အောင် လုပ်တော့တာဘဲကွာ။သမတကြီးကလည်း မပြင်ပေးဘူးတဲ့၊ ဟုတ်တယ်လေကွာ၊ လွှတ်တော်ထဲရောက်နေတဲ့ အမတ်အားလုံးက ဒီအတိုင်း ကျန်းကျိန်ထားပီးသားဟာကို။ ဦးအုန်းကြိုင်ကလဲ တစ်မှောင့်ကွာ၊ ဌာနချုပ်ကိုလာလာပြီး သူပြန်သွားရင် ပြသနာအသစ်တိုးလာပြန်ရော။ ဒီကနေ လွှတ်တော်စလုပ်ပီကွ၊ ငါ့နေရာလေးကို လိုက်ရှာမိတယ်။ အမေစုက ““လွှတ်တော်ကို မတက်ဘူးလို့ မပြောဘူး။ သွားနိုင်မယ့်အချိန်ကို စောင့်နေတာပါ” လို့ပြောတယ်။ ရှင်းနေတာကို ရှုပ်တာမှ နိုင်ငံရေးလို့ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်က ဦးအောင်ကြည်ညွန့်နဲ့ အမေစုပြောနေတာ ကြားမိပါတယ်ကွာ။ကိူုယ်သိတာတစ်ခုတော့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အမေစုက လက်မခံဘူး၊ မင်းတို့ကိုတော့ အဲဒါသိသင့်တယ်ထင်လုိ့ ပြောပြချင်တယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက ၄၇ မှာကတည်းက အဲဒီအတိုင်းဘဲပါတယ်။ ၄၇ ဥပဒေဆိုတာက အမေစုအဖေ အဘိုးအောင်ဆန်း လက်ရာဘဲ၊ အမေစုက အဖေ့လက်ရာကို ဖျက်နေတာကွ၊ ကိုယ်ါရယ်၊ မရမ်းကုန်းက ဒေါက်တာ စန်ဒါမင်းရယ်၊ စစ်ကိုင်းက ဦးခင်မောင်သိန်းရယ်က တောင်ငူက ဦးမျိုးခိုင်ရယ်က အချက်အလက် အထောက်အထားပြ ရှင်းတော့ အန်တီသိပြီးသားပါတဲ့၊ အန်တီ့ကိုဘဲကြည့်ပါ၊ အန်တီလုပ်သလိုလုပ်ပါ၊ အန်တီ့နောက်သာလိုက်ခဲ့ကြပါတဲ့။ဒါပါဘဲသူငယ်ချင်းတို့ရေ၊ ကိုရင်ဝတ်ရမယ်ဆိုလို့ သင်္ကန်းတောင်း ကျက်ထားပြီးခါမှ ရှင်မပြုရသေးလို့ကိုရင်မဖြစ်သေးပါဘူးကွာ။မင်းတို့ကို ချစ်ခင်နေတဲ့ဖြိုးဇေယျာသော်ပုပ္ဗသီရိမြို့နယ်အမတ် Myanmar Express
From : မောင်ခိုင်အောင် (စစ်တွေ)စာရေးဆရာကြီးမောင်ထင် (ရခိုင်တိုင်းမင်းကြီး ဦးထင်ဖတ်) သည် ၁၉၆၀ ဇူလိုင်လထုတ် မြ၀တီမဂ္ဂဇင်းတွင် "ရခိုင်ပြည်နယ်" အစီရင်ခံစာကို ရေးသားခဲ့သည်။ ၎င်းအစီရင်ခံစာထဲတွင် ရခိုင်တို့သည် အိမ်ရှင်ဖြစ်၏။ စစ်တကောင်းသားတို့က ဧည့်သည်တည်း။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းရင်းသားများသည် လူမျိုးမာနရှိကြသည်။ ရာဇ၀င်ကို ပြန်ကြည့်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သာကီဝင်မင်းမျိုးမှ ဆင်းသက်လာသည်ဟု ဆို၏။ ရခိုင်တို့သည် မြန်မာအကြီးစားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရခိုင်သည် သာကီဝင် အကြီးစားဟု ဆိုချိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆွေမျိုးကြီးသည် တော်ရုံတန်ရုံအလုပ်ကို အောက်ကျနောက်ကျအလုပ်ဟု ထင်သည်။ ဧည့်သည်လူမျိုးတို့ က ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ၌ နယ်သစ်တည်ရန် ရောက်လာကြသူများဖြစ်၍ ပိုက်ဆံရမည့် အလုပ်မှန်သမျှကို အောက်ကျနောက် ကျ ဖြစ်သည် ဟု မယူဆကြချေ။ ထို့ကြောင့် ဧည့်သည်တို့နေထိုင်ရာ ကုလားပန်ဇင်းမြစ်ဝှမ်း၏ အနောက်ဘက်ကမ်းခြေတွင် လယ်ယာဥယျာဉ်၊ သီးနှံလုပ်ခင်း၊ နွားခြံဆိတ်ခြံတို့သည် ရွှေပဒေသာပင် မြေကပေါက်စေသောဝ်ဟူသည့် သဘောတရား အတိုင်း မြေမှ ပေါက်လာကြ၏။၁၉၄၀-၄၁ ခုနှစ်၌ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးကို တုန်လှုပ်ချောက်ချားအောင်ဖန်တီးခဲ့သည်။ ရသေ့တောင်၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောနယ်ရှိ အမျိုးသားများသည် ဆန်ကောထဲတွင် ထည့်၍လှိမ့်သော ဆီးဖြူသီးကဲ့သို့ လိမ့်ကြကုန်၏။ထိုအချိန်က ရခိုင်တိုင်း၌ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှတို့သည် မြန်မာပြည်၌ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော နည်းအတိုင်းပင် ဗြိတိသျှတို့ အောင်မြင်စွာ ဆုတ်ခွာသော အချိန်သည် တော်လှန်ရေးသမား မြန်မာတို့အတွက် အချိန်ကောင်း ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ဗြိတိသျှစစ်ပြေးနှင့် အပေါင်းပါတို့သည် မြန်မာတို့ကို မယုံကြည်နိုင်ကြချေ။ ထို့ကြောင့် အချင်းချင်း ရန်တိုက်ပေးခဲ့၏။ ဗြိတိသျှဘက်တော်သားတို့ က မြန်မာအမျိုးသား မဟုတ်သောသူတို့ကို ကာကွယ်ရေးအကြောင်းပြ၍ ၎င်းတို့ယူမသွားနိုင်သော လက်နက်တို့ကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။ လက်နက်အများအပြားကို ရခိုင်အမျိုးသား မဟုတ်သူတို့ထံတွင် အပ်နှံခဲ့၏။ထိုအချိန်တွင် စစ်တွေခရိုင် အရေးပိုင်မှာ အိန္ဒိယပဋိညာဉ်ဝန်ထမ်း ဦးကျော်ခိုင် ဖြစ်သည်။ ဦးကျော်ခိုင်သည် မိမိဇာတိ ချက်ကြွေနယ်မြေကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးသော ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ တာဝန်ကျေပွန်သော ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအဖြစ် လည်းကောင်း၊ စစ်တွေခရိုင်၏ လုံခြုံရေးအတွက် ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ ဆောင်ရွက်ရင်း ဗြိတိသျှဘက်တော်သား စစ်ပြေးတို့လက်နက်နှင့် ကျဆုံးခဲ့ရသည်ကို မည်သူမျှ ငြင်းနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ကုလားပန်ဇင်း မြစ်ဝှမ်းဒေသအ၀င်ဝတွင် ဦးကျော်ခိုင်သည် သူချစ်မြတ်နိုးသော အမျိုးသားများအတွက် အသက်ကို ပေးခဲ့ရသည်။ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးဆုံးလေ၏။ ဗြိတိသျှမဟာမိတ်တပ်သားတို့သည် ရခိုင်တိုင်းသို့ ၀င်လာကြလေသည်။ ဗြိတိသျှမဟာမိတ်တို့ ၀င်လာသော လမ်းပေါက်အတိုင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ လူမျိုးစုံတို့သည် မြန်မာပြည်ထဲသို့ အလုအယက် ၀င်လာကြသည်။ ၀င်လာသော လမ်းကြောင်းကား ကုလားပန်ဇင်း မြစ်ဝှမ်းမှ အစပြုလေသည်။ စစ်တကောင်းအနွယ်တို့ ကုလားပန်ဇင်းမြစ်ဝှမ်းသို့ လာသော အခါ နို့စားဆိတ်မတစ်ကောင်ကိုသာ ယူဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့နှင့်အတူ ရှေးက မြန်မာပြည်တွင် မနေထိုင်ဘူးသော အဆွေအမျိုးတို့လည်း ပါလာကြသည်။မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရဲဘော်ဖြူနှင့် ကွန်မြူနစ်တို့သည် တောခိုကြလေသည်။ ဤတောခိုသော ဂယက်သည် ရခိုင်တိုင်းကို အကြီးအကျယ်ရိုက်လေသည်။ ထိုအခါ မူဂျာဟစ်လှုပ်ရှားမှုသည်လည်း ရောင်တော်ပြန်နှင့်ရောလွှတ်လေသည်။စစ်ပြီးခေတ် စစ်တကောင်းနယ်သားတို့၏ ၀ါဒသည် နတ်မြစ်ဝ တစ်ဖက်ကမ်းရှိ မယူတောင်တန်းဒေသနှင့် တောပန်ဇင်းမြစ်ဝှမ်းဒေသတို့ကို နယ်သစ်အဖြစ်ဖြင့် အခြေစိုက်ရန်ဟူသော ၀ါဒဖြစ်၏။"အိမ်ရှင်ကို မျောက်နှင်သည်" ဆိုသော ရခိုင်စကားပုံရှိသည်။ နိုင်ငံတကာတွင် ရွှေ့ပြောင်းလူသားများသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နေရာအနှံ့ အခြေချ နေထိုင်လျက်ရှိကြသည်။ သို့သော် ထိုသူများက ရှေးပဝေသဏီကပင် နေထိုင်လာ ပိုင်ဆိုင်လာသည်ဟု မီဒီယာများကိုသုံးကာ ကြေညာလာလျှင်၊ ဒေသခံလူမျိုးများအဖြစ် ကြွေးကြော်လာလျှင် မိမိတို့အား နေထိုင်ခွင့်၊ စားသောက်လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးထားသည့်အစိုးရအား မဟုတ်မမှန် လုပ်ဇာတ်ခင်း သိက္ခာချပါလျှင်၊ အိမ်ရှင်အစိုးရကို လက်နက်ကိုင်ပုန်ကန်ရန် ပြင်ဆင်လာလျှင် လူ့သမိုင်းသည် ကျေးဇူးတရားကင်းသည့် ဇာတ်လမ်း ဖြစ်လာရတော့သည်။ ဤဇာတ်မျိုးတစ်ခုသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုလိုနီဝါဒဆိုးမွေအဖြစ် ဖြေရှင်းမရ ကျန်ခဲ့ပေသည်။ဗြိတိသျှသိမ်းပိုက်ချိန်မှ စတင်ကာ အားကောင်းလာသော တရားမ၀င် စစ်တကောင်းသား ဘင်္ဂါလီအနွယ်များသည် "ရိုဟင်ဂျာ"ဟု နာမည်အတုအယောင်မှည့်ခေါ်ကာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို သူတို့၏ မူလတိုင်းပြည်အဖြစ် တောင်းဆိုသည်အထိ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား၏ ပြန်တမ်းများ၊ ဂေဇက်တီယားများ သမိုင်းမှတ်တမ်းများတွင် Chittagonian Bergali ဟူ၍သာရှိပြီး၊"ရိုဟင်ဂျာ"ဟူ၍ တစ်စွန်းတစ်စမှ မတွေ့ရှိရချေ။ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားသော တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများထဲတွင် "ရိုဟင်ဂျာ"မပါဝင်ချေ။ ဤသမိုင်း နောက်ခံဖြစ်ရပ်မှန်ကို ဗြိတိသျှသမိုင်းဆရာကြီးများ သိနိုင်ပါလျက် ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေကြ သည်မှာလည်း ထူးဆန်းနေသည်။ သမိုင်းကို ရေရေရာရာ မသိဘဲ လူ့အခွင့်အရေးပြဿနာနှင့် ချဉ်းကပ်ကာ "ရိုဟင်ဂျာ"အား နိုင်ငံကြီးတချို့ အားပေးထောက်ခံနေခြင်းမှာ စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာ အကျည်းတန် အရုပ်ဆိုးမှု ဖြစ်သည်။စစ်တကောင်းဘင်္ဂါလီတို့ ရခိုင်ဒေသတွင်းသို့ အလုံးအရင်းနှင့် ၀င်လာမှုသည် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ပထမစစ်ပွဲနောက်ပိုင်းတွင် စလာခဲ့သည်။ စစ်ပွဲတွင် အင်္ဂလိပ်တို့ဘက်မှ ၀င်ရောက်ကူညီခဲ့သူ သော်တလီမောင်ညိုအား နတ်မြစ်ဝဲယာကို အုပ်ချုပ်ခွင့် ဆုလာဘ် အင်္ဂလိပ်တို့ပေးခဲ့သည်။ သူတို့အနွယ်များသည် ဆက်တိုက်လိုလို လယ်ယာမြေတိုးချဲ့ရေးအတွက် စစ်တကောင်းသားများကို ငှားရမ်းခေါ်ယူခဲ့ကြသည်။ နတ်မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းမှစကာ မောင်တောမြို့နယ်တစ်ခုလုံး လယ်မြေချဲ့ထွင်မှုကြောင့် နတ်မြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်းသို့ ရောက်လာကြသည်။ အင်္ဂလိပ်များက ဒေသခံရခိုင်များ မလုပ်ကိုင်သော အလုပ်ကြမ်းများ၊ ကူလီ၊ မြေတူး၊ စပါးရိတ်တို့အတွက် စစ်တကောင်းဘင်္ဂလီများကို ခေါ်သွင်းကြသည်။ အလုပ်အကိုင်အဆင်ပြေ၍ တံခါးမရှိ၊ ဓါမရှိ ၀င်လာခဲ့ကြသည်။ စူးအက်တူးမြောင်းဖွင့်လှစ်၍ စပါးဈေးတက်လာသောအခါ ရခိုင်လယ်ယာမြေ စီးပွားရေး စန်းပွင်ခဲ့သည်။ လယ်မြေတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်အတူ လယ်ကူလီများ၊ ရာသီချိန်စပါးရိတ်လုပ်လားများ လှိမ့်ဝင်လာသည်။ လူဝင်မှုများပြားလာမှုနှင့်အတူ မောင်တော-ဘူးသီးတောင် ရထားလမ်းဖောက်ရာ၊ ဈေးပေါသော ဘင်္ဂါလီလုပ်သားတို့ကို ခေါ်သုံးပြန်သည်။ ၁၉၃၅ ခုနှစ် ခွဲရေးတွဲရေးပြဿနာတွင် ခွဲရေးနိုင်သဖြင့်၊ ဦးစော-ဆာကား စာချုပ်အရ ကုလားဝင်ရောက်မှုကို သုံးနှစ်ခွင့်ပြုရာ၊ လူလှိုင်းများလှိမ့်ဝင်လာပြီး လူသူမဲ့လယ်စပ်တောခြေများတွင် ကုလားရွာများ တည်ရှိလာသည်။ မူလ ကုလားရွာငယ်များမှာလည်း နှစ်ဆ၊သုံးဆထိ ကြီးလာသည်။အိမ်ခြေလျော့သော ရခိုင်ရွာများတွင် ကုလားတို့ ၀င်ရောက်နေထိုင်ကြသည်။ ကျန်းမာရေးဌာန၏ အစီရင်ခံစာ (၁၉၃၀-၃၁) အရ ဘင်္ဂါလီကူလီ ၄၀၀၀၀ ခန့် ၀င်ရောက်လာပြီး အချို့မှာ လုံးဝပြန်မသွားကြတော့ပေ။ ဗြိတိသျှ အာဏာပိုင်များသည် ပြဿနာ၏အတိမ်အနက်ကို ရိပ်မိလာသည့်အတွက် ဂျိမ်းအီစတာ၊ ဦးတင်ထွဋ်၊ တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ ဒေဆိုင်း တို့နှင့် စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်တစ်ခုကို ၁၉၃၉တွင် ဖွဲ့ခဲ့သည်။ ကော်မရှင်က စိုးရိမ်စရာ အခြေအနေကိုတင်ပြပြီး၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကို လိုအပ်သလို စိစစ်တင်းကျပ်ရန် အကြံပေးခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် စတင်ဖြစ်ပွားလာသောကြောင့် အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ဘဲ ခန့်မှန်းထားသည့်အတိုင်း ဗြိတိသျှတို့အဆုတ် ၁၉၄၂ တွင် အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားကာ၊ လူ ၂ သောင်းခန့် သေဆုံးခဲ့ရသည်။ ရခိုင်တို့မှာ အိမ်ပစ် မြေပစ် ပြေးခဲ့ရပြီး၊ ၎င်းနေရာတွင် ဘင်္ဂါလီများ အစား ၀င်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုရွာများသည် မူဆလင်ရွာများ ဖြစ်သွားခဲ့သော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာစေတီ၊ ဘုရားကျောင်း၊ သိမ်နေရာတို့ ယခုထိ တွေ့နိုင်သေးသည်။၁၉၄၈ လွတ်လပ်ရေးရပြီးစ ကာလတွင်၊ ရောင်စုံပုန်ကန်မှုများနှင့် ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လာသောအခါ၊ မူဆလင်တို့ အခွင့်ကောင်းယူကာ တစ်စခန်းထလာခဲ့သည်။ ရခိုင်အမျိုးသားများ ပြည်နယ်တောင်းသကဲ့သို့ သီးခြားပြည်နယ်တစ်ခု တောင်းဆိုလာပြီး၊ လက်နက်ကိုင် ပုန်ကန်ရန် ခြိမ်းခြောက်လာခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အား ဖဆပလအစိုးရမှ ခွင့်မပြုသည့်အတွက်၊ ရခိုင်လူထုသည် ဖဆပလအား မထောက်ခံတော့ဘဲ၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ (ရတည)အား ထောက်ခံမဲပေးခဲ့ကြသည်။ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်တို့ကား "မူဂျာဟမ်"နာမည်နှင့် ဆူပူသောင်းကျန်းခဲ့ကြသည်။ ၁၉၅၁ အလယ်သံကျော်ညီလာခံ (မောင်တောမြို့နယ်)တွင် ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို သီးခြားမူဆလင်ပြည်နယ်အဖြစ် တောင်းဆိုခဲ့လေသည်။ ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနု၏ ကိုင်တွယ်မှုပျော့သောကြောင့် ရခိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ ရုပ်ပြောင်များဆွဲကာ ရှုတ်ချ လှောင်ပြောင်ခဲ့ကြသည်။သို့သော် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်း (BTF)ကို ရခိုင်အမျိုးသား ဗိုလ်မှူးသာကျော် (နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ဟောင်း ကွယ်လွန်) ဦးဆောင်မှုနှင့် စေလွှတ်ကာ သောင်းကျန်းသူတို့အား ချေမှုန်းခဲ့သည်။ မူဂျာဟမ်တို့သည် စစ်ပြီးခေတ်တွင် အသစ်တည်ဆောက်ပေးထားသော ရခိုင်ရွာ (၆၀) အနက်၊ (၄၄) ရွာကို စီးနင်းဖျက်ဆီးကာ၊ လူသတ်၊ လုယက်၊ မုဒိမ်းမှုများ ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။ တပ်မတော်၏ တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းမှုကြောင့် မူဂျာဟစ်တို့ ပြိုကွဲ ရှုံးနိမ့်ကာ၊ ခေါင်းဆောင် ကာဆိန်းနှင့်အဖွဲ့တို့သည် တစ်ဖက်နိုင်ငံ (အရှေ့ပါကစ္စတန်၊ ယခု ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ)ထဲသို့ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ရပြီး၊ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်တို့၏ ခွဲထွက်ရေး လှုပ်ရှားမှု နိဂုံးတိုင်ခဲ့ရသည်။ Myanmar Express Read More
စက်မှုကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု သမ္မတပြောကြား
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စက်မှုကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဆင့်သုံးဆင့် ချမှတ်ပြီး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားရန် ရည်မှန်းထားကြောင်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ယခုလ ၆ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ Ministry of Knowledge Economy မှ ဒုတိယဝန်ကြီး မစ္စတာ Cho Seok ဦးဆောင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအား ယခုလ ၆ ရက်တွင် နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာနတွင် တွေ့ဆုံစဉ် အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။ အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးပေးနိုင်မည့် ယခုကဲ့သို့ စက်ရုံများ တည်ထောင်ပြီး ပထမအဆင့်အနေဖြင့် စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးလာရန် ဆောင်ရွက်သွားရန်ရှိကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတက ပြောကြားသည်။ လက်ရှိတွင် ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသား သုံးသန်းနီးပါးသည် ကိုရီးယား၊ စင်ကာပူ၊ မလေးရှားနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံများတွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်း၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့် ပြည်တွင်းစက်ရုံတစ်ရုံလျှင် လုပ်သားအင်အား တစ်ထောင်ခန့် လိုအပ်သည့် စက်ရုံ ၁၀ ရုံ တည်ထောင်မည်ဆိုပါက လုပ်သားတစ်သောင်းနီးပါးကို အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတက ပြောကြားသည်။ ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် ပြည်တွင်းမှ ထွက်ရှိသည့် ပစ္စည်းများကို တန်ဖိုးမြင့် ထုတ်လုပ်တင်ပို့နိုင်သည့် အဆင့်သို့ တက်လှမ်းနိုင်ရန် ရည်မှန်းထားကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတက ပြောကြားသည်။ ထို့အပြင် ပြည်တွင်းသစ်လုပ်ငန်း ကဏ္ဍတွင်လည်း ထွက်ရှိလာသည့် သစ်ကုန်ကြမ်းအမျိုးမျိုးကို သစ်အချောထည် ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံများ တည်ထောင်မည်ဆိုပါက စက်မှုကဏ္ဍအဆင့်မြှင့်တင်လာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ Myanmar Express